Waxaan ahay dhibbane ama ka badbaade xadgudubka guriga - Settled
Xaaladdaada qofeed baa laga yaabaa inay kugu adkayso inaad codsato Xaaladda Deggan, ama aad keentid caddeynta deggenaanshaha iyo aqoonsiga lagaa rabo. Waxaa laga yaabaa oo kale inaad welwel ka haysatid nabadgelyadaada iyo nabadgelyada dad kale, ama sida macluumaadka aad bixiso loo isticmaali doono.
Waxaa dhici karta inaadan haysan baasaboor ama kaarka aqoonsiga qaranka, ama ay kugu adag tahay inaad caddeysid inaad UK ku nolayd ama muddodaad ku noolayd. Hadaadan haysan dukumiintigaaga, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad la xiriirto qunsuliyaddaada ama safaaraddaada marka ugu horreeysa, si aad u fiirisid inaad dukumiinti cusub ka heli kartid, aadna u sheegtid in kuwii hore kaa lumeen ama lagaa xadey.
Waxaa jiraan qaabab kala duwan oo aad u gudbin kartid caddaynta degganaanshaha UK, Xafiiska Arrimaha Gudahana wuxuu sameeyay liis tusinaya dukumiintiyada ay aqbalaan.
Hadaad haysatid wax ka mid ah dukumiintiyadaan, fadlan meel fiican dhigo ama u dhiibo qof aad ku kalsoon tahay oo kuu haya. Isku day inaad qaadatid dukumiintayadan hadday kuu suuroobayso si nabad ah, hadaad go’aansato inaad ka baxdo xaaladdaada aad hadda ku suga tahay.
Haddaadan haysan dukuminitayada lagaa rabo ama ay dhib kugu tahay inaad heshid, waxaan kuusoo jeedinaynaa inaad talo siyaadaa ka raadsatid khadka talo bixinta ee Xuquuqda Dumarka.
Haddii aad la kulanto xadgudubka guriga aadna rabto caawimaad, taageero iyo talo waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah ururka Kaalmada Haweenka, kuna saabsan taageerada agagaarkaaga laga heli karo sida England, Scotland, Wales iyo Waqooyiga Ireland.
Haddaad qatar deg-dega ku jirtid, wac 999.
Hadaad hubto inaad heli kartid dukumiintiyada aad u baahan tahay, codsigaaga waxaad ka bilaabi kartaa halkan. Hadaadan haysan telefoonka casriga ee layska rabo, waxaad kusoo diri kartaa dukumiintigaaga boostada, ama waxaad dukumiintiyadaada ku sameyn kartaa xarunta iskaanka, inkastoo aad u baahan tahay inaad ballan samysatid, waxaana dhici karta inaad lacag bixisid, caadiyan £14 codsigiiba. ...